Location QR Code Generator ကို အသုံးပြု၍ QR ကုဒ်များဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း။
Oui-oui မွန်, Le Code QR! 🥖🇫🇷
ပြင်သစ်က“ QR ကုဒ်များ” လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီ post မှာတော့ကျနော်တို့အာရုံစိုက်နေကြသည် တည်နေရာ QR Code ကိုမီးစက် အထူးသ။ သူတို့ကိုအခမဲ့ဘယ်မှာရှာရမလဲ။ ယခုသင်သည် QR ကုဒ်များသည်တည်နေရာနှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သည်ကိုသင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ တကယ်တော့သူတို့ဟာ baguette နဲ့ဒိန်ခဲလိုတကယ်ကိုအတူတကွသွားကြတယ်။
အိုကေ၊ အဘယ်ကြောင့် Location QR codes လိုအပ်သနည်း။
တည်နေရာ QR ကုဒ်များသည်အလွန်ထိရောက်ပါသည် လူတွေကိုသင်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုခေါ်ဆောင်ပါ သူတို့ကို။ ဒီဟာကခင်ဗျားရဲ့ဆိုင်လား၊ ဒါမှမဟုတ်သင်အစည်းအဝေးတစ်ခုစီစဉ်နေတယ်။ အဓိကအချက်မှာ QR Code ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးပါက ၄ င်းတို့၏ဖုန်းတွင်တည်နေရာကိုချက်ချင်းရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းရဲ့အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ဂူးဂဲလ်မြေပုံထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်။ သင့်လုပ်ငန်းအတွက်အခြားကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်များစွာပေးလိမ့်မယ်။
၏အကူအညီဖြင့် ပြောင်းလဲနေသော QR ကုဒ်များ အမှုအရာတောင်ပိုကောင်းရ။ တည်နေရာ QR ကုဒ်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ ဦး ဆောင်သူများနှင့်ဖောက်သည်များကိုအွန်လိုင်းဖြင့်ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို Pageloot တွင် အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သည် Google Analytics ID ဒါမှမဟုတ် Facebook Pixel အင်္ဂါရပ်။ သင်၏အကြိုက်ဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းတွင်သင်၏ QR ကုဒ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်အချက်အလက်အားလုံးသင်၌ရှိသည်။
နောက်တစ်နည်းအနေဖြင့်သင်သည် Pageloot ၏ပေါင်းစပ်ထားသောစာရင်းဇယားကို သုံး၍ အချိန်ကိုသာမကစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု၏တည်နေရာကိုပါမြင်နိုင်သည်။ လူများသည်မည်သည့် QR ကုဒ်များကိုအများဆုံးစကင်ဖတ်ကြသည်။ ဤသည်ကသင့်အားမည်သည့်နေရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်ကိုနားလည်ရန်သင့်အားကူညီသည်။
Location QR ကုဒ်များဒီဇိုင်းအတွက်ထိပ်ဆုံး ၃ မှတ်
Google Maps အတွက်တည်နေရာ QR ကုဒ်များ
အဆင့် ၁ - Google Maps QR ကုဒ်ကိုလုပ်ပါ
Google Maps သည်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏ရှေ့တွင်သာရှိသည်။ အကြောင်းမှာလူတိုင်းနီးပါးက Apple မြေပုံများဖြစ်သော Bing နှင့် Waze တို့ဖြင့်သာအသုံးပြုကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရည်ညွှန်းချက်အတွက်သုံးစွဲသူ ၆၇၁TP1T ၀ န်းကျင်သည်ဂူဂဲလ်မြေပုံများကိုအသုံးပြုကြပြီး Waze တွင် 12% သာအသုံးပြုသည်။
ဒီတော့အဲဒီမှာလူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုကိုသုံးတာသဘာဝကျတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား? နောက်ဆုံးတွင်၊ သင်အသုံးပြုသူနှင့်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်တတ်နိုင်သမျှအသုံးပြုသူအမြောက်အများကိုပစ်မှတ်ထားချင်သည်။ Location QR ကုဒ်များကိုနေရာအမျိုးမျိုးတွင်သုံးနိုင်သည် အီးမေးလ်များ, လက်ကမ်းစာစောင် သို့မဟုတ်သို့မဟုတ် ပိုကြီးတဲ့ပိုစတာများနှင့်နဖူးစည်းစာတန်းများ.
ဂူဂဲလ်မြေပုံတည်နေရာ QR Code ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။
ကိုသုံးပါ QR Code Generator အခမဲ့ tool ကို
URL ကိုလယ်ပြင်၌ link ကို paste
သင်ပြောင်းလဲနေသော QR Code ကိုရွေးချယ်ပါ
သင်၏ QR Code ကိုသင်ဆန္ဒရှိသကဲ့သို့ဒီဇိုင်းဆွဲပါ
စမ်းသပ် & ဖြန့်ချိ!
အဆင့် ၂။ ကြည့်ရတာကောင်းအောင်လုပ်ပါ
ယနေ့ခေတ်တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည် QR ကုဒ်များဒီဇိုင်း။ ၎င်းတို့သည်ပုံမှန်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင် boxy Cube ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ သူတို့ကိုသင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏ပုံရိပ်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဦး ဆောင်မှုများမှပိုမိုအာရုံစိုက်စေရန်သင်လုပ်နိုင်သည်။
သင်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲနိုင်သည့်ကုဒ်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးအတွက်အောက်ပုံကိုကြည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဒီဇိုင်နာတစ် ဦး အနေဖြင့်မခံစားရပါက၊ စတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြခန်းနှင့်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောစုဆောင်းမှုအထုပ်များကိုကြည့်ပါ။ ပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်နှင့်အသံထွက်များဖန်တီးရန်အတွက်သင်သည် QR Code ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသာအရောင်ခြယ်နိုင်သည်။ သင်ခံစားရသည့်အရာသည်သင်အတွက်အလုပ်အရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ရန် QR Code Generator ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများနှင့်ကစားပါ။
ဘယ်တည်နေရာ QR ကုဒ်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
တည်နေရာ QR ကုဒ်များအတွက်ဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်
1. လိုဂိုတစ်ခုထည့်ပါ အဆိုပါ QR Code ကိုအတွင်းပိုင်း
3. တည်းဖြတ်ပါ ပုံစံကွက် ပုံစံ
ဖတ်လို့ရအောင်အတွက်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒါကစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုပြissuesနာကိုဖန်တီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်သတိပြုရန်လိုအပ်သည့်အချက်မှာနောက်ခံနှင့် QR Code အရောင်သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားလုံလောက်သောဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အနက်ရောင် QR Code သည်မီးခိုးရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်လုံလောက်စွာမမြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သံသယဖြစ်တဲ့အခါ၊ အမြဲစစ်ဆေးပါ။ သို့သော်စိတ်ပူစရာမရှိပါ၊ အွန်လိုင်း QR Code Generator tool သည်အရောင်များနှင့်ဆိုင်သောပြproblemsနာများရှိနိုင်လျှင်များသောအားဖြင့်သင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။
အရောင်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များပါသောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော QR ကုဒ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသောအချက်မှာ QR Code ၏ 30% ခန့်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီးအမှားပြင်ဆင်မှုကြောင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဟမ်?
အဆင့် ၃ - အမြဲတမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ
လူတိုင်းအားစတင်သုံးစွဲရန်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတိုက်တွန်းသည် ပြောင်းလဲနေသော QR ကုဒ်များ သူတို့ရရှိသောကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုအသုံးပြုရသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းများ -
တွေ့ရှိချက်များအပေါ် မူတည်၍ သင်၏အကြောင်းအရာကိုနောင်တွင်ပြောင်းလဲပါ
ပြောင်းလဲမှုသံသရာတိုးတက် & ထပ်ခါတလဲလဲလျှင်ကြည့်ပါ
အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။ Pageloot သည်သင်၏တည်နေရာ QR Code scan အချက်အလက်များ၏တကယ့်ကိုသန့်ရှင်းပြီးခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုပေးသည်။ သင်၏အသုံးပြုသူအားလုံးကိုခြေရာခံ၊ ပြောင်းလဲခြင်းမက်ထရစ်များကိုတိုင်းတာ။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များအတွက်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးထားပါ။
Location QR Code Scans အတွက်အလွန်လွယ်ကူသောစာရင်းအင်းများ
Q: တည်နေရာအတွက် Barcode QR Code Generators ကိုသုံးနိုင်ပါသလား။
A: မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်မူလရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ဘားကုဒ်များကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည်ပိုကောင်းပါသည်။ ဘားကုတ်နှင့် QR ကုဒ်များပြwithနာမှာဘားကုတ်များသည်၎င်းတို့အတွင်းရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုလုံလောက်စွာမကိုင်ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ ဘားကုဒ်များနှင့် QR ကုဒ်များ ဒီမှာ။
တည်နေရာ QR ကုဒ်အချို့ကိုဖန်တီးရန်အချိန်တန်ပါပြီ။
ယခုတွင်သင်သည်ဗဟုသုတနှင့်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များဖြင့်လက်နက်ကိုင်ပြီးပြီဆိုလျှင်ကျန်ရှိနေသောတစ်ခုတည်းသောအရာအားလုံးကိုယင်းတို့အားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏အခမဲ့ကိရိယာများကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သင်၏တည်နေရာမှသင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးအထိ QR Codes အမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးခြင်းအတွက်သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မည်။ WiFi QR Code ဖြစ်နိုင်ပါသလား? သို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်များအတွက် vCard လား။ ကြည့်ဖို့သေချာပါစေ။
အပေါ် QR ကုဒ်များ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
QR ကုဒ် အသုံးချ
အတွက် QR ကုဒ်များ စားသောက်ဆိုင်မီနူးများ